मोदी चाहान्छन्, ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बनुन् ! – Palika Times
मोदी चाहान्छन्, ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बनुन् !
उज्ज्वल प्रसाई २९ बैशाख २०७८, बुधबार प्रकाशित
उज्ज्वल प्रसाईं । छिटै निर्वाचन हुन सक्दैन । भारतमा भएका चुनावी सभाले कोरोना फैल्याउन खेलेको भूमिका बिर्सन सकिदैन । यहाँ पाँच वर्षलाई चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ, विधिवत नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ । बाँकी रहेको समयभित्र प्राथमिकतामा राखेर गर्नपर्ने महत्वपूर्ण काम छन्, तिनमा ध्यानस्थ हुनुपर्छ । तर, यो सम्भावना क्षीण छ ।
सूचनामा पहुँच हुने जोकोहीलाई थाहा छ, मोदीको भारतीय सत्ता खड्ग प्रसाद ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहान्छ । भूराजनीति बुझ्नेहरु भन्छन्, अरु भन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो ओली नै लागेको छ मोदीलाई । पाकिस्तान र मुस्लिम विरोधी राष्ट्रवादको खेती गर्ने भन्दा राम्ररी अरु कसले बुझेको होला ओलीको राष्ट्रवादी तुरुपको अर्थ ! त्यसको सामथ्र्य र सीमा !
थाहा छैन, भूराजनीतिमा विचारधारात्मक समानताले कति काम गर्छ । नरेन्द्र मोदी र खड्गप्रसाद ओलीका विचारधारा समान छन् । माथि नै भनियो, दुवै राष्ट्रवादी हुन् । मिथकीय पात्र रामलाई राजनीतिको मीयो बनाएर गरि खान खोज्ने, दुवै हिन्दुत्वावदी हुन् । एउटाले अयोध्याको राम बोक्यो, अर्कोले ठोरी समायो । दुवै खास–खास व्यापारीक घरानाका बफादार राजनीतिक प्यादा हुन् । विकास र समृद्धिका सपना दुवैका उस्तै छन्, अग्ला मूर्ती र धुरीप्रतिका अनुराग दुवैका उही हुन् ।
विद्यमान त्रासदी सम्हाल्न मोदी असफल भइसके । ओली असफलताको परिणाम हामीले भोग्न थालेका छौं । भारतमा लाखौं मान्छे मरिरहेका छन्, मरणको प्रत्यक्ष कारण कोरोना विषाणु हो । जड कारण मोदीको राजनीति हो, उनको विचारधारा हो । नेपालमा क्षणक्षणमा मान्छे मर्दैछन्, मुख्य कारण ओलीको राजनीति हो, उनको विचारधारा हो । भोली बित्न सक्ने लाखौं मान्छेको एक बारको जुनी मोदी र ओली दुवैको प्राथमिकतामा छैन । दुवैको प्राथमिकता समान छ – आफ्नो सत्ता, सत्ताले सुमरेका आफ्नै मुठ्ठी भर मान्छे !
मोदी चाहान्छन्, ओली नै फेरि प्रधानमन्त्री बनुन् । ओली चाहान्छन्, मोदीको आशिक आँफैलाई लागिरहोस् । मोदीको सत्ता अक्षुण्ण छ, ओलीको सत्ता जोगिने सम्भावना बलियो छ । यी दुवै जति बढी सत्तामा रहन्छन्, त्यति धेरै क्षति हुन्छ । मृत्युको ग्राफ उक्लिइरहन्छ, बाँच्नेहरुका दुःखका ग्राफले आकाश छुन्छ ।
अब के गर्ने ? थाहा छैन, के गर्ने । समयको दलिनमा झुण्डिएको एउटा जब्बर प्रश्नले हाम्रा निरिह अनुहारमा हेरिरहेको छः कसरी, कहिले र कुन बलमा परास्त हुन्छन् मोदी र ओलीहरु ?
भोलिबाट उपत्यकाका सरकारी कार्यालय बन्द